I-Arbily G8, i-TWS Hi-Fi headphones enomklamo onesibindi | Izindaba zamagajethi
I-Arbily G8, i-TWS Hi-Fi headphones enedizayini enesibindi kakhulu
Namuhla sikulethela umkhiqizo oyingqayizivele, amanye ama-headphone amasha avela ku-firm Ayikho imikhiqizo etholakele., esivele sihlaziye omunye umkhiqizo emasontweni ambalwa edlule. Kulokhu sinefayela le- I-Arbily G8, ama-headphone we-True Wireless anedizayini enesibindi yomsindo omncane nekhwalithi ephezulu. Impela ama-headphone we-TWS aya ngokuya ekhona osukwini lwethu nosuku ngenxa yenduduzo yabo, ukuzimela namandla, kepha phakathi kokukhethwa kukho okuningi emakethe kungaba nzima kakhulu ukukukhetha, kepha ngenxa yalokho sise-Actualidad Gadget, ukuhlaziya le mikhiqizo ekhethekile lokho kubazi eduze ngaphambi kokuzithenga.
1 Izinto zokwakha kanye nokuklama: Kuhluke kakhulu
4 Isipiliyoni somhleli
Izinto zokwakha kanye nokuklama: Kuhluke kakhulu
Lokhu ngukuwa komhlathi kokuqala kulezi headphone kusukela ngesikhathi ozithola ngaso. Ukupakisha kulula, akuyona into ethandekayo futhi empeleni kungaholela ekucabangeni ukuthi asibhekene nomkhiqizo wekhwalithi, kepha izinto ziyashintsha kancane kancane. Siza ubuso nobuso nebhokisi lezimpahla, umkhiqizo oyindilinga owenziwe ngopulasitiki omnyama onezimpondo ezimbili zenjoloba, amehlo abomvu akhanya ngama-LED abomvu nohlobo lwamazinyo amhlophe, futhi ngamalambu e-LED futhi akhombisa ukushaja okusele kwebhokisi.
Ngezansi ibhokisi licwecwe kancane, okuzosivumela ukuthi siwashiye etafuleni noma kunoma iyiphi indawo ngaphandle kwengozi yokuwa kwawo. Ngemuva sinokuxhumeka kwe-USB-C, okuphumelele kakhulu uma kubhekwa ukuthi abanye abaningi abavela emncintiswaneni basasebenzisa i-microUSB. Ekugcineni, ibhokisi livuleka kalula futhi linohlelo lukazibuthe olubavimbela ukuthi bavulwe ngephutha. Izinto zokwakha zilungile kepha icala liyangcola ngokushesha okukhulu yize kunesiphetho se-'matte '. Kubalulekile ukusho ukuthi ngayinye yalezi zindlebe inokukhanyisa kwe-LED okwembula "udeveli" omncane ofana nalelo osebhokisini, ekhanya kancane ngesikhathi sokusetshenziswa.
Siqala ngokuxhumeka, into ebaluleke kakhulu kulolu hlobo lomkhiqizo ukuze kungabikho ukusikeka noma amaphutha ekuxhumekeni. Kubaluleke kakhulu ukuthi baxhume ngokushesha ngaphandle kwebhokisi, futhi kunjalo impela. Ngalokhu usebenzisa I-Bluetooth 5.0, Ukuxhuma kwesizukulwane esilandelayo, empeleni enye yezinzuzo zeBluetooth 5.0 ngokunembile kungenzeka ukuthi kungukukhishwa komsindo okubili nokwamukelwa. Lokhu kusivumela nokuthi sisebenzise amahedfoni ngokuhlukile, okungukuthi, singasebenzisa eyodwa kuphela ukulalela umculo noma ukuphendula izingcingo uma sifisa, ngoba ngempumelelo ihedisethi ngayinye inombhobho ozimele.
Ngakolunye uhlangothi sinokumelana nomjuluko namanzi ngawo Ukuqinisekiswa kwe-IPX5 ngakho-ke ukusetshenziswa kwayo usuku nosuku akumele kube nenkinga yokuqina. Ngakolunye uhlangothi lezi Arbily G8 Bafaka ibhethri le-500 mAh ebhokisini ne-40 mAh ku-earbud ngayinye, okunganikeza ubuningi bamahora ayisithupha okungaba amahora angama-6 esewonke uma sisebenzisa ukushaja kwebhokisi, okuthatha ihora lokuxhuma kusuka ku-24% kuye ku-1%.
Enye yezinto ebaluleke kakhulu maqondana nomsindo ukuthi sithola ukufakwa okuhle kwe-acoustic, ngoba lokhu sisebenzisa i- ama-pads ahlinzekwa ngu-Arbily ebhokisini uqobo, sinosayizi abane: S, M, L no-XL. Uma sesizibeke kahle endlebeni zihlala endaweni yazo ngoba zikhanya impela futhi zihlala endaweni. Uma sesizibeke kahle siya kumsindo.
Arbily uyasiqinisekisa Umsindo we-Hi-Fi sibonga ubuchwepheshe I-Qualcomm aptX esivele izibonakalisile kweminye imikhiqizo yomsindo. Ngakho-ke sithole ivolumu elincane kakhulu nge-bass enhle ne-midrange ejwayelekile, nakanjani sinomsindo omuhle uma ubheka usayizi nekhwalithi enikezwa izimbangi zayo, ikakhulukazi uma sibona ukuthi zingaphansi kwe- € 50, futhi iseva ihlolile i-Galaxy I-Gear IconX nama-AirPod phakathi kwabanye abaningi. Umsindo muhle impela futhi ukwahlukanisa umsindo kuhle futhi, ikakhulukazi uma kubhekwa intengo yomkhiqizo.
Bengizisebenzisa izinsuku ezimbalwa impela, futhi iphuzu lokuqala elibi engilithola ngamahedfoni yilelo kanye ibhokisi, Yize kuyisici esigqame nesithakazelisa kakhulu, akunakwenzeka ukusibeka kunoma yiliphi ibhokisi noma ephaketheni ngaphandle kokucasula ngempela, kulokhu engikuqondayo kuhloselwe izilaleli ezisencane ezizokuthwala ngojosaka noma ezikhwameni. Kodwa-ke, kufanele ngithi ibhokisi lisebenza kahle kakhulu kukho konke okunye, kohlelo lokuvula nangomazibuthe abakhanga amahedfoni ukuze abekwe kahle.
Ezingeni lokuxhuma, abakhombisanga ukwehluleka, yize ukuzimela kungahambisani ngokuphelele nalokho okunikezwa ngumkhiqizo. Kokuhlangenwe nakho kwami ​​kokusetshenziswa ngithole cishe Amahora ama-4 okuzimela kwehedisethi ngayinye ngomculo ngevolumu engu-70% no Amahora angu-18 ngaphezulu ngamacala asebhokisini. Inkomba yokuzimela i-LED yamukelekile kakhulu, kanye nokuthi bakhethe i-USBC njengechweba lokushaja, ngaphandle kokuthi kuthatha ihora ukushaja ngokugcwele ibhethri.
Idizayini enesibindi futhi emnandi yomncane
Ukuxhumeka okuhle nokusheshayo nge-Bluetooth 5.0 ezenzakalelayo ngokuphelele
Imakrofoni isebenza kahle impela, ngisho nangaphandle
Ikhwalithi enhle yomsindo
Ibhokisi liba nzima ukuligcina ephaketheni lakho
Ama-LED ngamanye kuma-headphone akhanya kakhulu
Ngamafuphi, sibhekene namahedfoni anikezayo umsindo omuhle ngokuya ngevolumu namabhasi, kanye nokuzimela okuhle. Ukuxhumeka kuyazenzakalela ngokushesha nje lapho sibakhipha ebhokisini futhi singaxhumana nomculo ngokwenza ukuthinta okulula kumahedfoni, njengomculo ocushiwe noma wenzelwa lapho siwasusa. Mayelana nalokhu, i-Arbily G8 ihambisana ngokuphelele, Ayikho imikhiqizo etholakele. ngaphandle kokuthi idizayini yebhokisi ingeyami iphuzu elikhanga kakhulu nelibi kakhulu ngasikhathi sinye. Ngaphandle kokungabaza umkhiqizo owehluke kakhulu ongaba yisipho esithandekayo sabancane ekhaya.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Arbily G8, i-TWS Hi-Fi headphones enedizayini enesibindi kakhulu
Izipikha zeSonos sezivele ziyahambisana noMsizi weGoogle eSpain naseMexico
I-Photoshop ye-iPad isiyatholakala Yini le nguqulo isinikeza yona?